Ahịa nke Amazon.com, Inc. taa, ụgwọ nke AMZN ngwaahịa online ugbu a, òkè ahịa nke Amazon.com, Inc..
A na-emelite ozi na ngbanwe nke Amazon.com, Inc. na US dollar otu ugboro n'ụbọchị. Na-egosi ọnụahịa azụmaahịa ikpeazụ nke Amazon.com, Inc. na US dollar. A na-arụ ọrụ mgbanwe mgbanwe crypto na ahịa mgbanwe crypto. Otu ngwaahịa nke Amazon.com, Inc. ugbu a bụ 2 890.30 ngwaahịa nke US dollar. 1 ngwaahịa nke Amazon.com, Inc. adahade site na 11.6 US dollar. Ọnụ ahịa nke 1 ngwaahịa nke Amazon.com, Inc. ugbua na 2 890.30 ngwaahịa nke US dollar.
Amazon.com, Inc. òkè nke ụlọ ọrụ ahụ bara uru US dollar
Ọnwa isii gara aga, enwere ike rere Amazon.com, Inc. maka 1 874.97 US dollar. Otu afọ gara aga, enwere ike ịgbanwerịrị Amazon.com, Inc. maka 2 001.07 nke US dollar. Afọ atọ gara aga, enwere ike erere Amazon.com, Inc. maka 965.14 US dollar. Amazon.com, Inc. ọnụahịa ahịa dị US dollar adaba ile anya na eserese a. N’izu ahụ, Amazon.com, Inc. na US dollar ọnụahịa ahịa gbanwere site na 8.05%. 16.4% kwa ọnwa - ngbanwe nke ọnụahịa ngwaahịa nke Amazon.com, Inc..
Ntụle ahịa Amazon.com, Inc. US dollar
AMZN Ka US dollar (USD)
Taa, enwere ike ịzụta 28 903 US dollar maka ngwaahịa 10 nke Amazon.com, Inc.. Taa 72 257.50 USD = 25 ngwaahịa nke AMZN. Taa, enwere ike ịgbanwerịrị 50 nke Amazon.com, Inc. maka 144 515 US dollar. You nwere ike ịzụta 289 030 US dollar maka 100 ngwaahịa nke Amazon.com, Inc.. You nwere ike ịgbanwe 722 575 US dollar maka 250 ngwaahịa nke Amazon.com, Inc.. Taa, enwere ike ịgbanwerịrị 1 445 150 US dollar maka 500 ngwaahịa nke Amazon.com, Inc..
AMZN ihe ndekọ akụkọ ego
Amazon.com, Inc. na US dollar na 2 July 2020 - 2 890.300 US dollar. 1 July 2020, 1 ngwaahịa nke Amazon.com, Inc. = 2 878.700 US dollar. 26 June 2020, 1 ngwaahịa nke Amazon.com, Inc. akwụ 2 692.870 US dollar. Oke ego Amazon.com, Inc. na US dollar ọnụ ahịa ngwaahịa maka ọnwa gara aga nọ na 02/07/2020. Opekata mpe Amazon.com, Inc. na US dollar ọnụ ahịa ngwaahịa maka ọnwa gara aga nọ na 19/06/2020.
Otu òkè nke Amazon.com, Inc. taa na-eguzo na 2 890.30 $. Ọnụ ego AMZN gbanwere na +0.4% ma ọ bụ +11.6 USD kemgbe ụbọchị ahịa ikpeazụ. Ị nwere ike ịzụta 100 mbak Amazon.com, Inc. maka 289 030 US dollar ma ọ bụ ree 50 mbak nke AMZN maka 144 515 US dollar.
Amazon.com Inc bụ onye ntanetị n'ịntanetị.Ụlọ ọrụ ahụ na-ere ngwaahịa ya site na ebe nrụọrụ weebụ nke na-enye ọrụ, dịka ọrụ mgbasa ozi na nkwekọrịta kaadị azụmaahịa. Ọ na-enyekwa ngwaọrụ eletriki dị ka Ụdị ebere e-agụ na mbadamba Fire.